Fomba handraisana amin'ny Spam email: Fomba amin'ny seminera
Ny mpiserasera aterineto rehetra dia mitatitra hafatra maro isaky ny spam. Ny Internet dia feno mpitsangatsangana izay miezaka ny manatratra sy mahazo ny mombamomba ny tsirairay amin'ny fomba rehetra. Ny e-mailaky ny spam dia tonga amin'ny fomba samihafa, amin'ny fomba mahazatra izay mitaky mpampiasa iray hikiraoka amin'ny rohy iray manokana na koa manao famonoana antso an-tariby hafa - parchi con giochi per bambini veneto. Ny ankamaroan'ny spammers dia mikendry ireo mpampiasa izay afaka manomboka haingana ho an'ny phishing na mianjera amin'ny marary hafa.
Ross Barber, Tale Mpitarika Success Success of Semalt Digital Services, dia manolotra ireto fomba 5 hanitsiana ny mailaka spam.
1. Mamoròna adiresy imailaka hafa
Azonao atao ny mamorona adiresy mailaka fohy mba hampiasana amin'ny fomba samihafa amin'ny aterineto. Iray amin'ireo fomba lehibe indrindra amin'ny spammer ny fanangonana lisitra mailaka. Ireo kaonty mailaka manjavona dia afaka misambotra spammers ary marika azy ireo ho toy ny spam alohan'ny hamelezana azy ireo. Mahasoa ho an'ny mpampiasa ihany koa izany, raha tsy manome ny adiresy imailaka manokana amin'ny sehatra an-tserasera, izay mety tsy ho azo itokisana toy ireo avy amin'ireo loharano hafa. Ny adiresy imailaka sandoka dia afaka manaisotra ireo santionan'ny spam amin'ny fomba maro.
2. Mampiasà mpamatsy mailaka azo antoka
Ny ankamaroan'ny spammers dia mitombo noho ny fahamaikan'ny rafitra. Noho izany, dia zava-dehibe foana ny miankina amin'ny serivisy mailaka azo antoka, izay manana solosaina spam..Ny fitaovana sasany toy ny Unspyable, CounterMail, ary Shazzle dia manome ny adiresy VPN azo antoka ho an'ireo mpampiasa smartphone, ary manalavitra ny mety hisian'ny spammer mahazo miditra amin'ny mailakao. Amin'ny tranga hafa dia misy mpizara mailaka sasany manana fomba fisehoan'ny kankana, tranainy ary malware amin'ny zavatra hita ao amin'ny mailaka. Ohatra, ny mailaka Google dia afaka mamonjy anao amin'ny fanafihana spam maro.
3. Mametaka adiresy imailaka manokana
Mety ho sarotra ho an'ny spammer ny hahatongavana adiresy imailaka izay manana sora-bolana. Ohatra, sarona fiarovana marobe toy ny fahatanterahan'ny otrik'aretina roa dia mety hamadika ny hacking process, ka mamonjy olana be dia be ny mpampiasa. Ohatra, ireo mpampiasa Mac dia afaka mampiasa ny GPGTools mba hampidirana ny boaty mailaka. GPG4Win dia sehatra manan-danja iray hafa, izay afaka manampy ireo mpampiasa Outlook mba hijanona ho voaro. Ny fitaovana hafa dia ahitana fomba fiasa toy ny Thunderbird for Enigmail.
4. Mampiasà sivana spam
Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny solosaina spam dia matetika manakona ny endri-javatra amin'ny adiresy mailaka manokana. Manampy ny ankamaroan'ny olona hahazo fahafinaretana amin'ny famoahana ny mailaky ny spam raha tsy mampiasa ezaka ara-batana. Ny fomba azo antoka hanatanterahana izany dia manapariaka ny mailaka tsirairay mandeha mankany amin'ny lahatahiry manokana. Vokatr'izany, ny mailaka alefanao dia alefa ary manamboatra manontolo. Ity fomba ity koa dia mety hanampy amin'ny fitantanana ny sasany amin'ireo lafiny manan-danja indrindra toy ny faktiora, asa, sekoly ary asa hafa mifandraika amin'ny kaontinao mailaka.
Ny ezaky ny aterineto rehetra mifandraika amin'ny hafatra sy mailaka dia mety ho tratra. Ireo mpitsoa-ponenana dia manala ireo loharanom-pamokarana lehibe ary manatanteraka hetsika maro tsy marary amin'ny tatitra manokana izay heverin'izy ireo. Misy fomba izay ahafahanao mifandray amin'ny mailaka spam. Amin'ity vanim-potoana nomerika ity dia manana fitaovana maoderina ny spam mba handrindra ny asa sasany tahaka ny SEO. Ny fialana amin'ny torolàlana spam sasany dia afaka mamonjy anao ireo olana maro azon'izy ireo atao. Ity toro-lalana ity dia afaka manampy amin'ny fametrahana rafitra manohitra ny spam izay afaka mahatonga anao sy ny raharaham-barotra hijanona amin'ny mailaka mailaka.